5 Sababaha Si Baadh Europe By tareenka In December | Save A tareenka
Home > safarka Europe > 5 Sababaha Si Baadh Europe By tareenka In December
Waxaa jira wax cajiib ah fulinta saabsan aamusnaan eegaysaan out of a suuqa kala tareenka, ma waxaad u malaynaysaa? Sidaas, ilaawaan frisks ammaanka saaxiib, bacaha Ziplock cad oo cabitaanno ah, eber gaarka ah iyo basaska musqusha-yar. Ma jiro hab ka fiican si ay u sahamiyaan Europe badan tareen ee December. Halkan jira sababo naga sababta!
1. Baadh Europe tareen ee December iyo aad arki doonaa – dalxiisayaal ka yar
Dad badan ayaa soo jabay meelaha caanka ah inta lagu jiro xagaaga marka ay doonayaan in ay sahamiyaan Europe. Si kastaba ha ahaatee, cimilada qoraxdu ma keeno waxaa la, dadka. Dad badan oo dad badan oo! Waxaan jeclahay si ay u sahamiyaan Europe tareen ee December sababtoo ah waxaa jira dalxiisayaal si fudud u yar. muuqaal More, isjacayl, iyo meel adiga kuu!
2. Baadh Europe tareen in hab qaboobaha – heerka jaban
Sababta sababta aan u leeyihiin heerka jaban fudud yahay in sababta 1! dadka ka yar uyeelaysaan kuwo wax kasta oo jaban! Waxaan ka hadleynaa jaban hotels iyo tigidhada tareenka Dhulka dushiisa (inkastoo ay u badan tahay ma ku wareegsan Christmas /Sanad cusub).
tip A: Dhimis laga heli karaa dheeraad ah magaalooyinka yar yar aad ku tiirsan dalxiiska. Dabcan, magaalooyinka waaweyn ma u baahan tahay in ay isku dayaan sidii ay adag tahay si aad u hesho in macmiisha, sidaas darteed qorsheeyo si caqli ah haddii aad tahay on miisaaniyad!
3. Suuqyada iyo ciidaha
Eeg our post on cabsado The Feestooyinka Winter Best in Europe haddii aad raba info dheeraad ah oo ku xulatay our top. Suuqyada Street, si gaar ah gabi ahaanba waa meel kasta inta lagu guda jiro December. Dhab ahaan, waxa uu ka ahaa dhaqan December tan iyo 1400 ee! In on a tareenka macnaheedu waa dabacsanaanta, sidaa darteed waa in aad go'aansato in aad si fudud waa dambe sii joogi mid aad ka heli aad runtii jecel, ka dibna aad awoodid! Taasi waa quruxda safarka tareenka. Taasi waa sababta jirin hab fiican si ay u sahamiyaan Europe badan tareen ee December ay.
Haddii aad weligaa daawaday filimka Christmas a, waxaa uu ku xidhan tahay sawir sixir la rinjiyeeyay of jawiga. Picture khafiif ah ka dhicin xashka, kids tuuro kubbad, icicles, lugtii cidhiidhi ah ku dul socda iyada oo loo marayo barafka qaro weyn. Dabcan, nalalka iyo qurxinta! Waxaa jira meelaha kale ee in horjeeda qaab aad ka heli doonaa qaybo badan oo Europe.
Maxaa ka fiican si ay u sahamiyaan dal cunto kala duwan u leeyihiin in ay bixiyaan? Baadh Europe tareen ee December, oo waxay leeyihiin fursad ay ku booqdaan magaalooyinka kala duwan ee hal maalin. Baadhid maxaliga ah suuqa iyo keenaan qaar ka mid ah fudud dib on tareenka! Waxaad ku yeelan karto quraac, qadada, iyo Supper in 3 magaalo oo kala duwan!
tip: In Switzerland iyo qaybo ka mid ah France, isku day raclette iyo fondue, labadaas arrimood oo aad ku dhawaad ​​ku salaysan cheese diiriyo. Jarmalka jecel yihiin in ay soo baxaan ugaadheed markuu u qabow helo, iyo tallow dubay waa daruuriga iibiya at a suuqyada Christmas. Ha iloobin in aad ka dalban dhinac ah mulled khamri!
Ready in ay ku ballansan safarka in tareenka ee Meyeydaan? Great! Madax ku saabsan in SaveATrain and enjoy hassle and booking-fee free safarka tareenka!
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit ah la link a si post blog this, ama aad halkan riix: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fexplore-europe-train-december%2F%3Flang%3Dso - (hoos u riixdaa si aad u aragto Code Cudarada ah)
#DecemberHolidays Christmas ChristmasbyTrain europetravel Cuntada holidayeurope longtrainjourneys tareen safarka traveltips